LOHARANOM-BAOVAO FAHASALAMANA - TANINDRAZANA
ARTS SOSO-KEVITRA hafa Cinema efaha amin'ny isam- FIALAM-BOLY TOEKARENA
Ny krizy Covid dia manome an'i Afrika ny fotoana hanovana ny maodeliny
Chinde Oct 4, 2020 0
Ny voka-dratsy ateraky ny areti-mandringana any amin'ny kaontinanta dia antenaina fa hiharan-doza. Fa io krizy io koa dia fotoana iray hampiasana mpilalao sarimihetsika ho an'ny daholobe sy tsy miankina hiasa. Noho io antony io no tsy maintsy handrosoan'i Afrika ankehitriny.…
Gabon: amin'ny anaran'ny raim-pianakaviana, ny zanany lahy ary ny coronavirus
Chinde Sep 30, 2020 0
Raha mbola mihidy ny fiangonana noho ny Covid-19 any Gabon, dia mirongatra ny tsy fahafaham-po eo amin'ireo mpino. Ary ao anatin'ny klerjy. Ny lalan'ny coronavirus dia tsy azo idirana toa ny an'ny Tompo. Na siantifika na tsia, tsara ...
Antony 8 hisotro rano be
Antony 8 hisotro rano be Matetika ianao no maheno fa mila misotro rano be mandritra ny andro nefa tsy fantatrao ny antony? Ireto misy antony 8 tokony hisotro rano bebe kokoa! Mazava ho azy fa efa henonao indray mandeha, fara fahakeliny, ...
Teknika azo ampiharina mba hialana amin'ny Chin roa
Teknika azo ampiharina mba hialana amin'ny saoka roa Mety tsy ho fantatrao izany, fa ny fampivelarana saokany roa dia tsy vokatry ny fitehirizana tavy fotsiny. Antony maro hafa koa ny ...
Any Etazonia, ny ONG dia manameloka ny fanonganana an-tsokosoko ny tranonjaza any amin'ireo tobin'ny mpifindra monina
ALEXIS WAYAN Sep 15, 2020 0
ONG amerikana dimy no nametraka fitarainana nanameloka hysterectomies tao amin'ny foibe fihazonana vehivavy vehivavy mpifindra monina. Ireo fandidiana ireo dia hatao tsy araka ny nahim-pony. Ity dia…
Covid-19: fonja 3 herinandro nambara tany Israel!
ALEXIS WAYAN Sep 13, 2020 0
Ny governemanta israeliana dia nanome ny fankatoavany ny famerenana mandritra ny telo herinandro ny vahoaka manontolo manomboka ny zoma. Ny firenena araka izany no lasa toekarena mandroso voalohany naka fepetra toy izany hampiadana ny iray segondra ...
Bernard Tapie: tapa-kevitra ny hiady amin'ny homamiadana!
ALEXIS WAYAN Sep 8, 2020 0
Alatsinainy 7 septambra, Bernard Tapie dia niseho fampisehoana tamin'ny haino aman-jery nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny fifaninanana fahaiza-miteny nataon'ny mpisolovava tao amin'ny bara Paris. Ary ny feony somary tapaka dia tsy nanakana azy tsy hilaza fa faly izy na eo aza ny aretina.…
Côte d'Ivoire: marefo ihany ny serivisy ara-pahasalamana
Chinde Sep 5, 2020 0
Fananganana hopitaly, fananganana fandrakofana ara-pahasalamana manerantany ... Na dia nihatsara aza ny fidirana amin'ny serivisy ara-pahasalamana, ny efitra ara-pitsaboana sy ny tsy fahampian'ny fitaovana dia mampatsiahy antsika ny filana manohy ny politika fampiasam-bola ...
Madagascar: Ny Covid-Organics an'i Rajoelina dia tsy mandaitra foana na eo aza ny fisedrana ara-pitsaboana
Ny fivoaran'ny areti-mifindra coronavirus eto Madagascar dia niteraka fisalasalana momba ny fahombiazan'ny Covid-Organics izay notononin'ny filoha Rajoelina. Ireo firenena hafa izay manandrana izany dia vao mainka misalasala…… Efa hatramin'ny ampahany i Madagasikara…
Raha ny filazan'ny WHO Africa, dia hahazo fatra 220 tapitrisa dosie amin'ny vaksininy
Raha ny filazan'ny OMS Afrika dia hahazo dosia 220 tapitrisa dosie amin'ny vaksinina Rivotra fanantenana manakaiky an'i Afrika, hoy ny filazan'ny WHO. Nanamafy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa handray 220 tapitrisa i Afrika ...
Ivontoerana fampidirana volo ho an'ny fanavaozana ara-teknolojia manokatra ...
Bernard Lavilliers, ny fanohanany tsy tapaka an'i Bertrand Cantat, “…
Fampandrenesana: ny fitaovana amidin'i Lidl dia mety may amin'ny fotoana rehetra, ...
Mombamomba an'i Ludovic Bertin, tovolahy niaiky fa namono ...
xnxx: toro-hevitra 5 hitehirizana ny fiainanao amin'ny firaisana amin'ny mpiray trano aminao
xnxx: torohevitra 5 hamerenana ny fifehezana amin'ny fifandraisanao amin'ny ...
xnxx: Ireto misy sextes 10 halefa aorian'ny alina voalohany ...
xnxx: Ireto misy famantarana 3 manamarina fa misy olona milalao aminao ...
Yann Barthès nikiakiaka tao amin'ny TMC, nanameloka mivantana ny fanolanana…
Bertrand Cantat ao amin'ny Zénith: "Tsy misy fetrany ny ...
Baomba WWII nipoaka nandritra ny ...
Zanak'i Bertrand Cantat roa eo anilany: ahoana ...
xnxx: Ireto ny emoji hampiasaina ao amin'ny lahatsoratranao hamitahana
Nanafika ny lembalemban'i Cyril Hanouna ireo mpanao fihetsiketsehana, ...
Prev Manaraka 1 amin'ny 34